Maraykanka, 31 December 2018
Isniin 31 December 2018
Trump: Turkiga ayaa baabi'in doona Daacish
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump yaa sheegya in Turkey ay tirtiri doonto mintidiinta kooxda Daacish ee ku hara dalka Syria kadib marka milatariga Mareykanka ay kasoo baxaan dalkaas.
Taariikhda Qaar ka mida Dadkii ku Dhintey Qaraxii Muqdisho
Hawlihii D. Maraykanka oo Joogsaday
Hawlihii hay’adaha dawladda Maraykanka qaarkood ayaa maanta oo Sabti joogsaday, kadib markii maamulka Trump iyo Aqalka Congress-ku ay ku heshiin waayeen miisaaniyadda.
Aqalka Wakiilada Mareykanka oo ansixiyey miisaaniyad KMG ah
Aqalka Wakiilada Mareykanka ee ay hogaamiyaan Jamhuuriga ayaa ansixiyey miisaaniyad ku-meel gaar ah oo madaxweyne Trump siineysa shan bilyan oo dollar oo uu u codsaday dhismaha darbiga uu ka dhisayo xuduudda.
Xog-hayaha difaaca Mareykanka oo is-casilay
Xoghayaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegey inuu shaqada ka tagayo bisha February. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Tweeter-ka soo dhigey inuu howl-gab noqonayo Gen. Mattis bisha February ee sanadka dhalanaya.
Ciidamada Mareykanka oo kasoo baxaya Syria
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si lama filaan ah ugu dhowaaqay go’aan ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan dalka Syria.
Koongareeska Mareykanka oo ka arrinsanaya dhismaha darbiga
Mudanayaasha Kongareeska Mareykanka ee kala matala xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimoqraadiga ayaa isugu soo ururaya xarunta Coongareeska ee Capitol Hill.